Noo soo dir Email La xiriir Hada
Faahfaahinta alaabta Jawaab celin hadda
Model #: F-7567
Qaybta Badeecada: Mirror+basin+cabinet
Cabirka: Been Abuurka: 1800*600*850mm
Midab: As picture, Customized is very welcomed
Waxyaabaha: 5mm Silver LED Mirror/ Mirror Cabinet
Q1: Waa maxay waxyaabaha ka mid ah golaha wasakhda wax aan waxba tarayn?
A1: Waxaan u adeegsannaa alwaax adag qaabka, plywood dhabarka&guddiga dhinac.
Q2: Miyuu Frank bixiyaa OEM&Adeegga ODM?
A2: Kusoo dhawow OEM&Amar ODM, waxaan haynaa kooxo naqshadeyn xirfadeed leh 13 waayo-aragnimo loogu talagalay OEM&Adeegga ODM.
Q3aad: Intee ayey tahay waqtiga hogaamintu?
A3: Caadi ahaan 35 maalmood.
Q4: Waa maxay hababka baakadaha?
A4: Been Abuurka: Kartoonka caadiga ah la guddiga malabka malab. Countertop: Kartoonka caadiga ah oo qaab xumbo ah gudaha ku jira, ku xir xirmo alwaax ah ama kiish alwaax ka baxsan. Hababka wax lagu rakibo waa la awoodi karaa.
Q5: Sidee ku saabsan shuruudaha lacag bixinta?
A5: 30% dhigaalka horumarsan, 70% dheelitirka ka hor rarka.
Q6: Miyaan ku yeelan karaa astaanteyda alaabta?
A6: Haa, waad awoodaa.
Q7: Muxuu qiimeeyaa adeegyada Frank bixiyo?
A7: Astaamaha biraha bilaashka ah ee Frank provde, keyd, naqshadeynta alaabta, Naqshadeynta naqshadeynta buugga iyo sawirrada wax soo saarka xirfadeed ee adiga loogu talagalay.
If you have some problems about Double basin design modern MDF bathroom vanity cabinet with led light mirror F-7567, or want to know more details about Buthtub,Mordern style,Dusha adag,etc. Welcome to contact us!
Waxyaalaha Musqusha ee Qaabdhismeedka Style-ka Mareykanka ah
Qaybta Musqusha Qolka Musqusha ee Qaaliga ah ee Qiimaha Yar
Noocyada Musqusha Qolka Musqusha ee Style-ka Mareykanka ah
Waxyaalaha Musqusha ee Qaabdhismeedka Style-ka Mareykanka ah oo lagu qurxiyo
Qiyaasta Musqusha Musqusha ee loo yaqaan 'American Style American Double Customized'
Qolka Musqusha ee Style-ka Mareykanka ah oo Faan u ah Hoteelada
Musqusha Qaabka Qaaska ah ee Faan ahaaneed Qaabka Yurubiyaanka ee Wood Oak
Qolka Musqusha ee Musqusha Qolka Musqulaha ee darbiga leh